AMP-Plugin mit IFrame Unterstützung - XH
I-plug ye-AMP yamaphepha aneeframes
I-Accelerated Mobile Pages (AMP) umvelisi wokwenza amaphepha e-AMP kaGoogle , iiplagi ze-AMP kunye ne- AMPHTML i-tag generator iqulethe ukuguqulwa okuzenzekelayo kwee-iframes kwiithegi ze-<amp-iframe>.
<amp-iframe> ukudityaniswa kwethegi
Ukukhawulezisa uMenzi wamaphepha eselfowni ngokuzenzekelayo kubhaqa ukuba ingaba iframe ifakwe kwiphepha lakho na kwaye iguqula nayiphi na iframes efumanekayo ithegi <amp-iframe>.
I-AMPHTML okwangoku ivumela kuphela ukulayishwa komxholo ononxibelelwano olusebenzayo lwe- HTTPS !
Ukukhawulezisa iGenerator yamaphepha eselfowuni kuJonga ngokuzenzekelayo ukuba ngaba i-URL esetyenziswe kwi-iframe nayo inokufikelelwa ngonxibelelwano olufihliweyo lwe-HTTPS. Ukwenza oku, uMvelisi wamaPhepha aSebenzayo oKhawulezayo utshintshisa nje 'i-HTTP' ye 'HTTPS' kwi-URL. Ukuba i-URL inokuvulwa nge-HTTPS, uMvelisi wamaPhepha aSebenzayo oKhawulezayo uguqula i-iframe iye kwi-tag ye-amp-iframe ehambelanayo kwaye yenze ukuba umxholo we-iframe ufumaneke kuhlobo lwe-AMPHTML.
Ukuba i-URL ayinakulayishwa nge-HTTPS, umxholo we-iframe awunakuboniswa ngqo kuhlobo lwe-AMPHTML. Kule meko, uMvelisi weeNgcaciso zaMaphepha aSebenzayo uveza le ndawo yokubamba ilandelayo:
Ngokucofa lo mzobo, umsebenzisi emva koko unokuvula umxholo we-iframe ngonxibelelwano lwe-'HTTP 'olungabhalwanga. Ngale ndlela, umxholo we-IFrame ubuncinci unokufikelelwa ngesinye isisombululo kwaye awukhathalelwa ngokupheleleyo.